AU oo ka hadlay magacaabista RW cusub iyo arin ay kula taliyeen.. - iftineducation.com
AU oo ka hadlay magacaabista RW cusub iyo arin ay kula taliyeen..
iftineducation.com – Madaxa Uqeybsamaha midowga Afrika Ee Soomaaliya Maman S. Sidikou ayaa soo Dhaweyay Magacaabista Raiisal,wasaaraha Cusub Ee Soomaaliya Mr Cumar Cabdirashiid Cali Sharma,arke kaasi oo Bedelay Raiisal,wasaarahii Hore Ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh axmed Maxamed.
Ra’iisalwasaaraha Cusub ee Soomaaliya Mr sharma,arke ayaa shalay oo ay taariikhda ku Beegned 17 December 2014 waxa uu sheegay in Hadii ay Baarlamanka Soomaaliya ay Ansixiyaan In uu Soo dhisidoono Xukuumad Tayo wanaagsan leh.
Ambasador Maman S. Sidikou ayaa ugu baaqay Raiisal,wasaaraha Cusub in uu la tashi la sameeyo Sharci dajiyeyaasha ama Baarlamaanka Soomaaliya si buu yiri loo helo Xumuud wax samata bixin karta.
Waxaana uu rajo wanaag ka muujiyay Ambasadorka in Raiisal,wasaaraha Cusub uu hore u soo qabtay Xilka Raiisal,wasare nimo Sanadadii 2009 ilaa 2010 xiliyadii Dowladahii KMG aha ay dalka ka shaqeynayeen iyo sidoo kale howlaha uu hore usoo qabtay Raiisal,wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharma,arke in ay ka mid yihiin Ambasadorkii Dowlada soomaliya ee Dalka Mareekanka taasi oo uu sheegay in ay usii Fududeyndonto Gudashada waajibaadka shaqo e Horyaala Xiligani.
Daraasad: Hadaad jeceshahay helista DAHAB, Quraanjada raadkeeda raac.!
Daawo Sawirro: Lixdii Nin ee xasuuqa fooshaxun ku laysay Ardeyda Pakistan